PVB / SGP Film Extrusion Line - China PVB / SGP Film Extrusion mpamatsy, Factory –Jwell
Sarimihetsika PVB / SGP dia sarimihetsika thermo-plastika vita amin'ny resina sy plastika an'ny PVB / SGP. Izy io dia be mpampiasa amin'ny interlayer ny fanamboarana vera, fiara, fitaratra photovoltaic masoandro, fitaratra tsy misy bala, fitaratra porofom-peo, sns. Misy fiarovana azo antoka, porofo azo antoka, ultravio- let-proof, ary afaka miloko na mangarahara be, ary ampiasaina ho an'ny fitaratra rindrina fananganana mandritra ny 70 taona mahery. Izy io koa dia sanda fampiharana Optical, ary photovoltaic amin'ny masoandro ihany koa.
Misy karazany roa ny fomba famokarana: amin'ny alàlan'ny famolavolana roller sy ny fampangatsiahana rano, ny hatevin'ny vokatra farany dia
0.38-1.52mm, ny sakany dia 500-3400mm, mangarahara, loko misy loko ary sarimihetsika miloko feno dia tsy voatery.